Mayelana NATHI - Abenzi Bezigidi | Izisombululo ze-MM Solutions, izixazululo ze-mm, izixazululo ze-mm, izixazululo ze-mm inc, izixazululo ze-mm, izixazululo ze-mm inc, izixazululo zabenzi abayizigidi, izixazululo zabenzi besigidi, i-mm llc, abenzi bezigidi llc
Inhloso yethu ukuxazulula izinselele ezinkulu kakhulu zeklayenti lethu nokunikeza ngamava amahle kakhulu.
Kunikezwe Izixazululo Zezifiki: 22,156.
Izixazululo Zezomthetho: 19,132.
Izixazululo zezinkampani, ezinikeziwe: 86,742
Thumela Izidingo Isidingo Sokwazi
Izixazululo Zokufuduka: 22,156
Izixazululo Ezinkampanini: 86, 742
Sithathe iminyaka eminingi yesipiliyoni ekwenzeni ubungcweti bethu kanye nezinhlangano zomhlaba wonke kanye nokubambisana ukubonelela ngezinsizakalo ezinhle kakhulu nezisombululo kumakhasimende ethu ngamanani ancintisanayo kakhulu.
Sinikeza kuphela izixazululo ezenziwe ngezifiso ezisebenza kahle kuwe, kuphela ngemuva kokuqonda izinjongo zakho kanye ne-Asappations.
Ngokuhlangenwe nakho kwethu okukhulu nezinsizakalo ezahlukahlukene ezinikezwe yinkampani yethu njengoba kushiwo ngenhla, sisiza abantu, imindeni kanye namabhizinisi ngobuchwepheshe bethu obukhethekile ukufuduka, ukuxhasa, ukunweba nokukhulisa, sikulungele ukukunika indlela yempumelelo. Noma ngabe unentshisekelo yokufuduka, ukuhlangana nokutholwa noma ukufuna ukulayisha izinqubo zakho zehhovisi elingemuva, usesha imali noma umlingani onamasu noma ufuna uhlelo lwakho lokulandelana kwesizukulwane esilandelayo, ukubonisana ngezimali nokusekelwa noma ufuna izinsizakalo zezezindlu noma izinsiza ezihlobene nokufika imfundo phesheya noma izixazululo ze-IT esingakusiza kuzo zonke izinsiza ngamanani wokuncintisana kakhulu.
Kucace bha futhi sobala maqondana nezinqubo zethu futhi siyathemba ukuthi amaphuzu alandelayo aphendula imibuzo yakho ebalulekile
Siyazibophezela futhi ngathi "Ukuziphatha okuhle kumakhasimende ethu kuhlala kunjalo kuqala"
Silandela indlela ehlelekile, esebenza kahle futhi ehlelekile esebenza ngentshisekelo enhle kakhulu Kwamakhasimende ethu nemindeni yabo njengesisombululo esingcono kakhulu.
Simele njengesiqinisekiso salowo nalowo oMelekeleli, Umuntu ngamunye, Umndeni, Ibhizinisi, Ozakwethu Nabahlanganyeli.
Ukuxhumana okusheshayo nangokucacile.
Imfihlo yedatha ibaluleke kakhulu kithi.
Kuvuselelwa maqondana nemithetho yamanje yamazwe omhlaba.
Singabaqeqeshiwe abanolwazi olukhethekile lwebhizinisi.
Isixazululo esenziwe ngokwezifiso sabo bonke amakhasimende ethu nemindeni yabo.
Sikwazi ukukuqonda kahle, ibhizinisi lakho nezinhloso zakho ngokuphelele futhi ngaphambi kokuxoxa ngezinketho noma amathuba.
Sisebenza ngezinga eliphakeme kakhulu lozwela nokubekezelela iklayenti lethu, yonke imibuzo yakho iphendulwa ngesikhathi esifushane kakhulu ngezixazululo ezifanele izidingo zakho nesimo sakho.
Sihlala njalo sinenhloso ephelele, ngokuphelele futhi ngempumelelo.
Sigxila kakhulu kwezixazululo ezilula kakhulu futhi ezingcono kakhulu, kumakhasimende ethu.
Ngokuxhuma okuyingqayizivele kanye nokuma ngaphakathi Kwezimboni esikhethekile kuzo, sinikeza amakhasimende ethu ukufinyelela kokupheleliswa kwamanzi ngokuphelele kwamathemba.
Sicela ufunde ngenqubo yokusebenza kwamakhasimende ethu nababambisene kuyo ukusebenza kwethu .
Izixazululo Zethu Zabantu, Imindeni, Nenhlangano Ehlanganayo
Izixazululo ezenzelwe wena
Ibhizinisi Lokuthengisa / Lokuthenga
Zonke Izinsiza Nezixazululo
Ukusethwa Kwebhizinisi Nokwandiswa
Iseluleko Sokuhlala Kwesikhashana
Iseluleko Sokuhlala Kwaphakade
Amazwe angaphezu kwangama-60
Sisekela Abantu Bodwa Nezinkampani.
Amazwe angama-28 + 60 emhlabeni jikelele. Akunasidingo sokuceba kakhulu.
Asikhokhisi abafundi ngokubonisana kwethu.
Ithimba lethu lihlinzeka ngezixazululo ezahlukahlukene zebhizinisi lomhlaba.
Sihlela izinsiza zomthetho ezisezingeni eliphansi zemindeni, umuntu ngamunye.
Sesha wena noma usebenzise izinsizakalo zethu ezenziwe ngabantu.
Inobuchwepheshe obukhulu ekucwaningweni kwemali, intela.
Amazwe angama-96 kanye ne-28 States yase-USA
Ama-Akhawunti Ebhange emazweni angama-95 kanye naseMazweni angama-28 ase-USA
Amakhambi Ezixazululo Zabasebenzi
Unebhizinisi okufanele usebenzile, ake siphathe izinto eziyinkimbinkimbi zezinqubo ze-HR zakho.
Sebenzisa i-Job Portal yethu mahhala yezindleko ukucinga abasebenzi noma kuphi emhlabeni.
Iziphathimandla ze-EU nezasolwandle
Amahhovisi ama-Virtual emakheli omhlaba wonke athakazelisayo
I-logo eyenzelwe i-Professional Designer kusuka ku- $ 200
Amawebhusayithi enzelwe wona
Ukuqamba Okwenziweyo Nokwehlukile Ukusuka ku- $ 200
I-Akhawunti Yomthengisi kanye Nesango Lenkokhelo
Ukwemukelwa kwenkokhelo emazweni angama-190
Izinombolo ezingama-Virtual zamazwe angama-89 kanye namadolobha angama-290.
Sinikezela ngezixazululo ze-CRM nokuhlanganiswa ukukunikeza amandla okulawula okungcono kwebhizinisi lakho.
Jika Ukubonisana Okuzungezile
Thina kuMillion Makers sigxile kuqala ekwenzeni ibhizinisi liphumelele.
Ukusebenza Capital Solutions
Sinethiwekhi eqinile nokuxhumana nezikhungo zezezimali ngezidingo zakho zezezimali ezinkulu.
Ukuxhasa ngemali imishini yakho kukuvumela ukuthi ulondoloze imali yakho ngezidingo ezahlukahlukene zebhizinisi.
Ochwepheshe bethu bokulinganisa banobuchule obukhulu ekucwaningweni kwemali, intela, ezomnotho kanye nomqondo wokulinganisa.
Amaphrojekthi we-1000+ aqediwe
Sihlela izinsiza zomthetho ezisezingeni eliphansi zemindeni, umuntu ngamunye, izitshudeni, izinkampani kanye nama-Corporates.
Sikunikeza cishe noma uluphi uhlobo lwensiza esemthethweni esemthethweni.
Sisekela Abantu Bodwa kanye Nezinkampani ekutholeni amathuba nabavotelwa, ngokulandelana.
Ithimba lethu lihlinzeka ngezixazululo ezahlukahlukene zebhizinisi lomhlaba
Sisiza izinkampani ukuthola abantu abalungile abalungele kahle iphrofayili.
Sikusiza ekutholeni abaholi abaphethe abalungile abanikezela amandla amakhulu adingekayo ekukhuleni kwebhizinisi.
Sinikezela ngezinsizakalo ezahlukahlukene ukusiza amabhizinisi aqala kusuka ezinkontilekeni zokuqashwa, ukuphathwa kwabasebenzi bakwa-HR, abakhokhela intela kanye nentela.
Thatha ithuba lomkhakha wethu wolwazi namasu wokuqasha afakazelwe.
Sisekela Abantu Bodwa Nezinkampani ekutholeni amathuba
Besinikela izinsiza nokubonisana emabhizinisini ukulungiselela ibhizinisi, ukunwebeka nokukhula.
Ukunwetshwa Kwebhizinisi Lwamanye Amazwe
Ithimba lethu lihlinzeka ngezixazululo ezahlukahlukene zebhizinisi lomhlaba ezizovumela ibhizinisi lakho ngempumelelo.
Sikusiza ekutholeni abaholi abaphethe abalungile abanikezela amandla amakhulu adingekayo ekukhuleni kwebhizinisi
Izinombolo ezingama-Virtual zamazwe angama-89 kanye namadolobha angama-290
Ubumbano Nobumbano Lobumbano, Ukuphendula, Ukuzula kanye ne-SEO OPTIMIZED
Umhlinzeki wokuxazulula oyedwa wokuhlinzeka ngezisombululo zebhizinisi
I-Ecommerce Solutions yekhwalithi yaphesheya
Kuthuthukiswe izinhlelo zokusebenza ezingaphezu kuka-351+ zamaklayenti ethu aphesheya.
Ubunjiniyela bomkhiqizo weSoftware kusuka ekubonisaneni kuya ekuthuthukiseni, ekuhlolweni nasekusebenzeni kwe-devOps.
Ukukhula komkhiqizo kwakho komkhiqizo nemikhiqizo yomugqa wakho we-inthanethi.
Kubangelwa inani eliphakeme lebhizinisi nezimali ezingenayo
Izisombululo zeBlockchain ezenziwe ngezifiso, kungakhathalekile ukuthi zimboni.
Vuselela ulwazi lwakho oluphathelene nezinsizakalo ezahlukahlukene esikunikeza.
Yazi ngemicimbi yomhlaba.
Thola izindaba zakamuva ngokufuduka, imfundo, izinqubo zebhizinisi, iHR, izinguquko zebhizinisi laphesheya ezithinta sonke, nokuningi.
Mema abangani bakho, osebenza nabo, umndeni futhi wenze amabhizinisi amasha nokuxhumana nomphakathi.
Uma utholela noma yiziphi izinsizakalo zethu ngaphezu kokukhuthala kanye nezinsizakalo zokuhambisana nokulandela umthetho akuzona izindleko.
I-Ecommerce Solutions yekhwalithi yaphesheya.
I-Akhawunti Yomthengisi kanye namasango okukhokha kanye namasango okukhokha
Sinikezela ngezixazululo ekufinyeleleni esangweni lokukhokha
Ukukhula komkhiqizo kwakho komkhiqizo nemikhiqizo yomugqa wakho we-inthanethi
Ithuba lokuthengisa / ukuhambisa bese wakhe iqembu lakho bese uhola.
Akukho Ukutshalwa kwemali okudingekayo
Yakha iqembu lakho nomaphi emhlabeni
Thola Ukuxhaswa Kwebhizinisi Okukhula kuze kufike ku- $ 2000
Ngingumnikazi webhizinisi elizimele ungangisiza kanjani?
Ngokuhlangenwe nakho kwethu okukhulu kanye nezinsizakalo ezahlukahlukene ezihlinzekwa yinkampani yethu, sisiza abanikazi bamabhizinisi abazimele kanye nemindeni yabo ukwakha inkampani futhi basungule ibhizinisi elisha, bandise, bakhulise futhi bagcine amabhizinisi abo, sikulungele ukukuqondisa endleleni eya impumelelo. Noma ngabe unentshisekelo ku-M & A, fuduka, ubheke ukulayisha emuva i-minutia yehhovisi, usesha imali oyinhloko noma umlingani wecebo noma ufuna uhlelo lwakho olulandelayo lokulandelana. Lokho kuncane ngathi.
Ngokuhlangenwe nakho kwethu okukhulu, ubuchwepheshe kanye nezinsizakalo eziningi ezinikezwe yinhlangano yethu nenkampani, besisiza futhi senza lula abanikazi bebhizinisi, izinkampani kanye nezindawo zokuhlala, kanye nemindeni yabo ukufaka inkampani nokwakha amabhizinisi amasha, ukunwebeka, ukukhulisa nokuxhasa amabhizinisi abo noma ufuna umsebenzi, sikulungele kakhulu ukukuhola ekuhambeni uze uphumelele. Noma ngabe unentshisekelo kwi-Merger ne-Acquisition, ukuthutha kabusha, ukufuna ukulayisha emuva imisebenzi nezinqubo ezisehhovisi, ukuzama ukuthola imali noma umlingani onamasu noma ufuna ukuhlela okulandelayo kwesizukulwane esilandelayo, noma ufuna ukwelulekwa kwezindlu noma izinsizakalo Zokufika noma Ezemfundo Kwamanye Amazwe noma i-IT. Izinsizakalo esingakusiza kuzo zonke izinsizakalo njengoba kushiwo.
Sinikezela ngezinsizakalo eziningi kumakhasimende ethu aphesheya kanye nabalingani bethu okubandakanya abantu, Abatshalizimali, Izimali Zotshalomali / Izikhwama ze-VC, Izinkampani kanye Nezinkampani. Incase, yamaphrojekthi asebenzayo futhi angaba impumelelo, singasiza ekubambisaneni okunenzuzo namathuba wemali futhi, uma kudingeka.
Abasenzi abayizigidi bangumhlinzeki wokuxazulula oyedwa wokuhlinzeka ngezisombululo zamabhizinisi ezingasiza ibhizinisi lakho hhayi nje nge-IT Solutions kepha futhi nokunwebeka ngaphakathi kepha hhayi nje kuphela ekuthuthukisweni kweWebhu, izixazululo ze-Ecommerce, ukuthuthukiswa kwezinhlelo zokusebenza, ukumakethwa kwedijithali, izixazululo zesoftware kanye Ukuthuthukiswa kwe-tecnology ye-blockchain nokwenza umsebenzi kwebhizinisi lakho ngentengo yokuncintisana kakhulu, kodwa futhi, sinikezela nangezixazululo zokuphothula ukungena kwesango lokukhokha, izinsizakalo zezomthetho, ukubonisana ngezimali, izixazululo ezenziwe ngokwezifiso ze-HR, okufaka inkampani kunoma yikuphi ukuphuma kwezi-98 ezilungele izidingo zebhizinisi lakho, ukuvula ama-akhawunti asebhange, ukubhaliswa kwezimpawu zokuhweba emazweni ayi-119 ngefomu lesicelo elilodwa nje, ukubiza abambalwa.
Sasiqala futhi, yingakho, siyazazi izidingo, ukuhlela nokuqeqeshwa okudingekayo, izinhlungu. Sisiza, sisekela futhi siqale ama-Start-ups ukuya endaweni efanele ngesikhathi esisheshayo esinqunyelwe isikhathi ngezindleko eziphansi kakhulu.
Ukufukamela & Imali
Sinethiwekhi enkulu kakhulu yabatshalizimali bamanye amazwe, ngakho-ke, njengosizo, sisiza futhi ukuxhuma ukuqala kwethu nabatshalizimali abangaba khona.